Soo -saarayaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha PET - Shiinaha PET Factory
0.3 oz oo buluug ah PET dhalo fidsan oo leh 12-400 qoorta dhammaatay
Dhalooyinkayaga ah 0.3oz/8.8ml ee ka samaysan xayawaanka xayawaanka ah waxay ka samaysan yihiin maaddada PET Dhalada waxay ku fidsan tahay qaabka dhibcaha biyaha. Dhalada ayaa tilmaameysa in la baari karo ama lagu daaweyn karo koolo. Waxaa lagu samayn karaa astaanta ay samaysay shirkaddaadu si kor loogu qaado saamaynta sumcadda shirkaddaada. Qaabka guud ee dhalada caaggu waa mid is haysta, oo ku siinaysa waayo -aragnimo ka fiican iyo saamaynta shaashadda. Daboolka wuxuu qaataa daboolka dunta iyo shaabadda fur si aad u hubiso in badeecadu tahay 100% xidhitaan.Waxa loo isticmaali karaa baakadaha indhaha, baakadaha saliidda ee muhiimka ah, dhalooyinka baakadaha sigaarka elektarooniga ah.
0.5 oz oo buluug ah PET dhalo fidsan oo leh 12-400 qoorta dhammaatay
Dhalooyinkayaga dhibcaha ah 0.5oz/15ml waxay ka samaysan yihiin maaddada PET. Dhalada ayaa tilmaameysa in la baari karo ama lagu daaweyn karo koolo. Waxaa lagu samayn karaa astaanta ay samaysay shirkaddaadu si kor loogu qaado saamaynta sumcadda shirkaddaada. Qaabka guud ee dhalada caaggu waa mid is haysta, oo ku siinaysa waayo -aragnimo ka fiican iyo saamaynta shaashadda. Daboolka wuxuu qaataa daboolka dunta iyo shaabadda fur si aad u hubiso in badeecadu tahay 100% xidhitaan.Waxa loo isticmaali karaa baakadaha indhaha, baakadaha saliidda ee muhiimka ah, dhalooyinka baakadaha sigaarka elektarooniga ah. Dhalooyinka dhibcaha jumlada ah.
2.7 oz brown PET dhalo laba geesle ah oo leh 38-400 qoorta dhammaatay
80ml PET brown Pharmaceutical Plastic Vitamin Bottle Pill Pill Capsules Bottle.Qalab caafimaad leh iyo bay'ad u fiican.non-sun iyo dhadhan lahayn, Si sahlan loogu ciyaari karo dhaladaan yar ee la qaadan karo.OEM Service: daabacaadda shaashadda xariirta xariirka, calaamadda warqadda, sumadda caagga ah, duubista. Dhalo daawo caag ah oo qaabaysan oo madhan. Jirka weelka kiniinigu waa cad yahay, dhalaal wanaagsan, wax -qabad shaabad leh , gudaha oo aad u nadiif ah, ayaa soo raran kara kiniinnada degdegga ah, Kiniinnada sida caadiga ah loo isticmaalo, isticmaalka habboon. dhalooyinka kiniinka caaga ah ee iibka ah
2.7 oz dhalo wareegsan oo PET ah oo dahab ah oo leh qoorta 36-400
Badeecada 2.7oz dhalada PET dahabka ah. Dhalooyinka caagga ah ee leh daboolka dahabka ah waxay muujinayaan inay sameeyeen daaweynta dahaadhka dahabka, saamaynta baakaduhu way fiicantahay oo way ka sii qurux badan tahay, waxay samayn kartaa baakadka sanduuqa hadiyadda. Dhalada dawada caaga ah waxaa loo samayn karaa si loo muujiyo astaantaada astaanta.Waxay samayn kartaa weelka kaabsulka, weelka budada iyo wixii la mid ah. midabbo kale haddii aad rabto. dhalada caagga ah ee kiniinka
6.7oz 200ml dhalo PET cad oo leh qoorta 24-410
6.7oz dhalo caag ah oo dareere ah. Soo saar midabyo kala duwan hadba baahidaada. Haddii dareerahaagu midab yahay, markaa dhalooyinka PET ee dabiiciga ah ayaa ugu fiican. Daboolka caagga ah, daboolka roga, buufinta iyo bamka ayaa la heli karaa. Ilaalinta deegaanka iyo badbaadada hufan PET dhalada caagga ah ee heerka cuntada leh dabool flip ayaa loo isticmaali karaa dhalo tuujin. PET-heer-cunto waa sun ahayn, dhadhan lahayn, nabdoon, bay'ada u fiican oo leh sifooyin wax lagu xiro. Way fududahay in la qaado alaabtaada daryeelka maqaarka marka aad socoto, oo leh naqshad isku dhafan oo la qaadan karo, meel kasta waad gelin kartaa, waxaad ku badbaadin kartaa meel bannaan oo la qaadi karo safarka hawada.
100ml hufnaan PET dhaaskeen dhalo oo leh 18-410 qoorta dhammaatay
100ml dhalada caagga ah ee xayawaanka. Haddii dareerahaagu midab yahay, markaa dhalada PET ee dabiiciga ah ayaa ugu fiican. Koofiyadaha caaga ah, koofiyadaha wax lagu duubo, buufin iyo bambooyin ayaa la heli karaa. Dhalada caagga u ah, nabdoon oo hufan PET dhalada caaga ah ee heerka cuntada leh oo leh dusha sare ayaa loo isticmaali karaa dhalo tuujin. PET-ka darajada cuntada ah waa mid aan sun ahayn, dhadhan lahayn, nabdoon, bay'ada u fiican, oo leh sifooyin wanaagsan oo wax lagu xiro. Adeegyada OEM: Daabacaadda shaashadda Logo, summadaha waraaqaha, sumadaha caagga ah, baakadaha yaraynta. Si sahlan loo isticmaalo oo loo nadiifiyo. Way fududahay in la qaado alaabta daryeelka maqaarkaaga, oo leh naqshad yar oo la qaadan karo, waxaad ku ridi kartaa meel kasta, meel badbaadinaysa oo ku habboon safarka hawada.
6.8oz 200ml dhalo PET cad oo leh qoorta 24-410
6.8oz dhalo caag ah oo dareere ah. Soo saar midabyo kala duwan hadba baahidaada. Haddii dareerahaagu midab yahay, markaa dhalooyinka PET ee dabiiciga ah ayaa ugu fiican. Daboolka caagga ah, daboolka roga, buufinta iyo bamka ayaa la heli karaa. Ilaalinta deegaanka iyo badbaadada hufan PET dhalada caagga ah ee heerka cuntada leh dabool flip ayaa loo isticmaali karaa dhalo tuujin. PET-heer-cunto waa sun ahayn, dhadhan lahayn, nabdoon, bay'ada u fiican oo leh sifooyin wax lagu xiro. Way fududahay in la qaado alaabtaada daryeelka maqaarka marka aad socoto, oo leh naqshad isku dhafan oo la qaadan karo, meel kasta waad gelin kartaa, waxaad ku badbaadin kartaa meel bannaan oo la qaadi karo safarka hawada.
6.8 oz dhalo PET madow oo wareegsan oo leh qoorta 60-410
200ml PET dawada madaw ee caaga caaga dhalada fiitamiin dhalada kaabsoosha ku habboon xirxirida dawooyin badan oo adag oo si sahlan loo rari karo oo loo kaydiyo alaabo caafimaad iyo deegaan u fiican.non-sun ahayn oo aan dhadhan lahayn, Si sahlan loogu ciyaaro dhaladaan yar ee la qaadan karo.OEM Service: daabacaadda shaashadda xariirka, calaamadda warqadda, caaga calaamad, duub duub. Dhalada dawada caagga ah oo madhan oo qaabaysan oo madhan. beerta isdaba -marinta: daawooyinka, alaabta daryeelka caafimaadka, cuntada iwm.
5 oz cad PET dhalo buufin ah oo wareegsan oo leh qoorta 24-410
5oz 150ml dhalada buufinta oo qaadata maaddada PET, oo waarta adeegsiga muddada dheer. Naqshaddeeda dhalada buufinta caagga ah ayaa ka dhigaysa mid gaar ah oo qurux badan. Madaxa kicinta buufinta leh naqshad gaar ah ayaa ku habboon in la qabsado oo si sahlan loo isticmaalo Afkeeda oo si fiican u xiran ayaa buufin doona ceeryaamo wanaagsan, aadna ugu habboon in lagu shaqeeyo. Ku habboon isticmaalka guriga iyo adeegsiga saloon timo -xirfadeedka Adeegga Dhalada dawada caag ah oo wareegsan oo madhan Jidhka dhalada ayaa cad, dhalaalaya oo wanaagsan, wax -qabad shaabad fiican leh. Goobta is -beddelka: dhalada buufinta timo -jaraha, dhalo madhan, dhalo ceeryaamo la buuxin karo, qalabka timaha timo -jaraha, qalabka daryeelka buufinta biyaha iwm.
2.7 oz dhalo PET cagaar ah oo wareegsan oo leh 40-410 qoorta ah
100ml PET cagaaran Daawooyinka Caaga Faytamiin Dhalo Kiniinka Kaabsoosha Dhalada. Miisaanka culeyska, iska caabbinta saameynta, caddaynta daadinta wanaagsan, guryaha kiimikada deggan; ku habboon xirxirida dawooyin badan oo dareere ah iyo kuwo adag oo si sahlan markab loogu kaydiyo loona kaydiyo agab caafimaad iyo deegaan u fiican. aan sun ahayn oo aan dhadhan lahayn, Si sahlan loogu ciyaari karo dhaladaan yar ee la qaadan karo. , Calaamadda caaga ah, duub duub Dhalo daawo caag ah oo qaabaysan oo madhan. Dhalooyinka kiniinka caagga ah ee cad ayaa cad, dhalaalaya, wax qabad wanaagsan. beerta isqorista: dawooyinka, alaabta daryeelka caafimaadka, cuntada iwm dhalada kiniinka caadada ah